स्क्रिन सेयरमा प्रेमिल जोडीहरु कति हिट कति फिट ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
स्क्रिन सेयरमा प्रेमिल जोडीहरु कति हिट कति फिट ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म होस् या म्यूजिक भिडियो रिल जोडीमा रियल जोडी देखिनु नौलो होइन । श्रीमान श्रीमती र प्रेमी प्रेमीकाहरु स्क्रिन सेयर गर्ने गर्दछन् । उनीहरुको फिल्म चले पनि नचले पनि म्यूजिक भिडियोमा भने डिमाण्ड बढ्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा प्रेमिल जोडिहरु हिट पनि छन् । अभिनयको हिसावमा भने केही जोडीहरु फिट पनि छैनन् । फिल्मको प्रचार प्रसार, प्रतिक्रिया र ब्यापारको आधारमा हिट र फिट छन् या छैनन् भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । त्यस मध्य केहीलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।
फिल्म ‘घामट शेरे’मा निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका रहेको छ । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती हुन् । दर्शकमाझ उनीहरुको क्रेज निकै राम्रो छ । हेमराज विसीको निर्देशनमा निर्माणाधिन फिल्मको छायाकंन हाल सालै सकिएको छ । उनीहरु म्यूजिक भिडियोमा पनि सँगै देखिएका छन् ।
फिल्म ‘मासु भात’ पनि निर्माणधिन छ, यसमा प्रेमिल जोडी सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ । उनीहरुको अभिनय रहेको अर्को फिल्म ‘पोइ पर्यो काले’ पनि निर्माणधिन छ । लामो समयदेखि प्रेममा रहेको यस जोडीले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गर्दैछन् ।
नायक सलोन बस्नेत र नायिका करिश्मा श्रेष्ठ प्रेममा थिए । यो प्रेमिल जोडी फिल्म ‘बाबु कान्छा’मा देखिएका थिए । ‘बाबु कान्छा’ले रजतपटमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन । त्यस्तै, नायिका नीता ढुगांना र नायक आमेश भण्डारी प्रेममा थिए । उनीहरुले पनि एकसाथ दुई फिल्ममा काम गरे । ‘फुलै फुलको मौसम तिमीलाई’ र ‘तँ, म र उ’ । तर, दुबै फिल्म असफल भए । हाल यो जोडी छुट्टिएका छन् र म्यूजिक भिडियोमा एकसाथ देखिरहेका छन् ।
नायिका ऋचा शर्मा र नायक विनय श्रेष्ठ पनि प्रेममा थिए । उनीहरुले फिल्म ‘भिजा गर्ल’मा स्क्रिन सेयर गरे । हाल उनीहरु छुट्टिएका छन् । प्रेमिल जोडी नायिका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी अभिनित फिल्म ‘प्रेम दिवस’ हालसालै प्रदर्शनमा आयो । तर, फिल्मले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । यस अघि उनीहरु फिल्म ‘चंगा चेट’मा पनि सँगै देखिएका थिए । उनीहरु म्यूजिक भिडियोमा पनि सँगै देखिरहेका छन् ।
एकै फिल्मबाट रजतपटमा डेब्यु गरेका आँचल शर्मा र पल शाह पनि प्रायः फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा देखिने गर्दछन् । उनीहरु प्रेममा रहेको चर्चा चलेको लामो समय भयो । तर, उनीहरुले प्रेम सम्बन्ध भने नकार्दै आएका छन् । उनीहरु विज्ञापनमा पनि सँगै देखिन थालेका छन् ।
यस्तै प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङलाई पनि पछिल्लो समय प्रमिल जोडीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यी दुईले एकसाथ दुई फिल्ममा काम गरेका छन् । फिल्म ‘लिलि बिली’ र ‘लभ स्टेशन’ सँगै काम गरेका यी जोडी तेश्रो फिल्ममा पनि देखिने निश्चित रहेको छ ।
यस्तै नायक आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्मा पनि फिल्म ‘रामकहानी’ बाट प्रमिल जोडीको रुपमा कहलिएका छन् । शुरुमा निर्देशक सुदर्शन थापासँग नाम जोडिएर आउने पुजा शर्मा हाल आकाश श्रेष्ठको साथमा रहेकी छिन् । आकाश र पुजाको अभिनय रहेको दोश्रो फिल्म ‘पोई पर्यो काले’ को छायाँकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।